Shaqo ka fariisi dib loo Dhigay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulan looga xaajoonayo shaqa ka fariisi. Sawirle: Jonas Neuman/SR Gotland
Shaqo ka fariisi dib loo Dhigay
La daabacay fredag 8 juni 2012 kl 16.22
Ururka shaqaalaha ee maqaayad iyo huteellada ayaa dib u dhigay shaqa-ka-fariisi la filayay in maanta gelinka dambe lagu tallaabsado. Iyadoona haddii la isku af-garan waayo waanwaanta lagu dhawaaqay in dib loo bilaabi doono isniinta foodda innagu soo haysa ee 11-ka bisha juun abbaaraa labada duhurnimo.
Waxey noola muuqataa in waanwaanta lagu guuleeysan karo. Goolyaguna wuxuu weli yahay sidii aan heshiis wanaagsan ku wada gaari laheyn. Waana mid noo suurtagelinaya howshaa mar haddii aan dib u dhignay falkii shaqa-ka-fariisi, sida uu hayadda wararka ee TT u sheegtay hogaamiyaha ururka HRF, Ella Niia:
Is-fahanka ugu wayn waa mushaarka ugu hooseeya ee lagu shaqa-galo. Ururka shaqaalaha wuxuu ku andacoonayaa in kor loo qaado 600 bishii, halka ururka mulkiileeyda maqaayad iyo hoteelladu uu taagan yahay ku dhowaad 500 oo koron.